Gregoriosy avy any Nisa - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Grégoire de Nysse)
Anarana Gregoriosy avy any Nisa
Teraka taona 335
Maty taona 395
I Gregoriosy avy any Nisa dia teolojiana sy mistika malaza, evekan'i Nisa tao Kapadokia sady Rain'ny Fiangonana na Aban'ny Eglizy izay niady tamin'ny arianisma tamin'ny fampandrosoana ny teolojian'ny Trinite sy ny tenim-pinoanana momba ny Fahatongavan'i Kristy ho nofo. Teraka tao Neokaisaria (Niksar ankehitriny ao Torkia) tao amin'ny faritanin'i Ponto-Eoksina (Ranomasina Mainty) tamin'ny taona 335 ary maty tamin'ny taona 395 izy.
I Gregoriosy avy any Nisa dia iray amin'ireo teolojiana kapadokiana ngezalahy sady mpanorina ny lova teolojikan'ny fiangonana tatsinanana, niaraka amin'i Gregoriosy avy any Nazianzosy sy ny rahalahiny Basiliosy avy any Kaisaria.
Nisy fiantraikany tamin'ny asa soratr'i Denisy Aeropagita, izay atao hoe Pseodo-Denisy, sy tamin'ny teolojia mistika latina tamin'ny Andro Antenantenany manontolo ny fisainana teoljikany.
I Gregoriosy avy any Nisa dia teolojianan'ny Trinite sy ny Fahatongavan'i Kristy ho nofo izay niharan'ny filozofia neoplatonisianan'i Plotinosy, ka namelatra antropolojia miorina amin'ny faniriana sy ny fihetsika tsy manam-petran'ny fanahin'olombelona mankany amin'Andriamanitra.
Amin'ireo asa soratra teolojika nataony dia azo resahina ny Fanoherana an'i Eonomio, izay fiarovana ny Fiekem-pinona nikeana izay manohitra ireo tsangan-kevitr'i Eonomio, izay maneho ny arianisma, ny Katedraly Lehibe, izay fiarovana ny finoana kristiana amin'ny Jiosy sy ny Jentilisa, ary ny Firindran-levitra folo, izay nosoratany hanoherana ny apolinarisma izay nilaza fa tsy tena olombelona i Kristy. Nanoratra ny Fiderana ny maha virjiny koa izy tamin'ny taona 371, ho an'ny anabaviny Makrina, izay monka vavy.
Vao tsy ela akory izay no nahafantarana ireo asa sorany, indrindra noho ny fikarohan'ny pretra zezoita sady kardinaly no akademisiana frantsay Jean Daniélou, sy noho ny fanangonana ny lahatsoratry ny Rain'ny Fiangonana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Gregoriosy_avy_any_Nisa&oldid=977898"
Dernière modification le 1 Desambra 2019, à 18:04